Manatrika ITB? Ahoana no hiatrehana Coronavirus? Ahoana ny momba anao?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Manatrika ITB? Ahoana no hiatrehana Coronavirus? Ahoana ny momba anao?
Fizahan-tany azo idirana • Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Thailandey • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Safertourism, PATA, ary ATB dia hametraka fironana amin'ny sakafo maraina mandritra ny ITB miaraka amin'i Dr. Peter Tarlow - ARY nasaina ianao. Noana?
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mampiseho faharetana. ITB Berlin dia eo no mivory isan-taona izao tontolo izao mba hanehoana sy hiadian-kevitra momba ny dia sy fizahan-tany. 2020 dia manana fanamby tsy natrehan'ny indostria taloha: ny rahona mainty ao ambony dia fantatra amin'ny anarana hoe Coronavirus izay antsoina ankehitriny hoe COV19.
Ny talen'ny talen'ny Dr. Mario Hardy, PATA, dia nilaza: “COV19 dia misy fiatraikany lehibe amin'ny asa fizahan-tany sy fizahan-tany ary toeran-kaleha any amin'ny faritr'i Asia Pacific sy ny sisa. Eo am-piandrasana ny fanarenana; ahoana no hiatrehantsika izany? Ahoana no fomba hiomanantsika ho amin'ny ho avy mamiratra kokoa?"
Miaraha aminay hisakafo maraina
"Faly i PATA manohana ity hetsika ataon'ny SaferTourism sy ny TravelNewsGroup ity. Manantena ny hianatra avy amin'i Dr.Peter Tarlow aho, mpanoratra sy manam-pahaizana momba ny fifandraisana amin'ny krizy. "
hiaraka aminay hisakafo maraina
Dr. Peter Tarlow an'ny Fizahantany azo antoka kokoa teamed miaraka PATA, ny Birao fizahantany afrikanina, ary ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany sy fizahana krizy manerantany hiresaka fomba iray handrosoana.
Dr. Taleb Rifai, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha ary filohan'ny GTRCMC dia efa nanamafy ny fandraisany anjara.
Safertoursm dia ao amin'ny Vondron-tserasera momba ny dia, tompon'ny eTurboNews. Ny filohan'ny TravelNewsGroup Juergen Steinmetz dia nilaza hoe: "Amin'ny maha-boky an-tserasera tranainy sy mitarika indrindra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, mihoatra lavitra noho izany ny andraikitsika amin'ny fitaterana hotely sy toeran-kaleha mahafinaritra.
Indraindray mila mijoro ianao. Manana ny fotoana ahafahantsika miaraka mivondrona vondrona mpitarika fanta-daza ary mifanakalo hevitra amin'ireo mpilalao amin'ny sehatra samihafa amin'ny indostria misy antsika. Io ihany no hametraka fironana vaovao ary hanampy amin'ny vahaolana. ”
Ny fivoriana sakafo maraina dia maimaimpoana ho an'ny mpikambana ao amin'ny PATA, Birao fizahantany afrikanina, Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany, ary LGBTMPA fa azon'ny rehetra alaina kely amin'ny fandraisana anjara.
Entanina ny mpamaky eTN hanatevin-daharana an'ity dinika lehibe ity amin'ny Alakamisy 5 martsa amin'ny 8.00 ora maraina any Berlin.
Fampahalalana bebe kokoa sy fisoratana anarana: https://safertourism.com/coronavirus/